Uhlu lwezitolo zohlelo lokusebenza lwe-Android. Ukusebenza k
ⓘ Uhlu lwezitolo zohlelo lokusebenza lwe-Android. Ukusebenza kwamadivaysi eselula asebenzisa uhlelo lokusebenza lwe-Android, uhlelo olusetshenziswa kakhulu lwesel ..
ⓘ Uhlu lwezitolo zohlelo lokusebenza lwe-Android
Ukusebenza kwamadivaysi eselula asebenzisa uhlelo lokusebenza lwe-Android, uhlelo olusetshenziswa kakhulu lweselula emhlabeni jikelele, lungandiswa ngokusebenzisa "izinhlelo zokusebenza" - isoftware ekhethekile eyenzelwe ukunika abasebenzisi izindlela zokusebenzisa amadivaysi abo ngezinjongo ezithile ezingeziwe. Izinhlelo zokusebenza ezinjalo zihlanganiswa ngefomethi yefayela le-APK yomdabu ye-Android evumela ukusatshalaliswa kalula kwezinhlelo zokusebenza kubasebenzisi bokugcina.
Iningi lezinhlelo zokusebenza lisatshalaliswa nge-Google Play Store kepha izakhi eziningi zesoftware, noma ezitolo zezinsiza, zikhona. Izitolo zohlelo lokusebenza ezingezinye zisebenzisa inketho "yemithombo engaziwa" yamadivayisi we-Android ukufaka amafayela we-APK ngqo ngesiphathi sephakheji se-Android.
Isitolo seGoogle Play
Isitolo seGoogle Play ekuqaleni iMakethe ye-Android, esisebenza futhi sithuthukiswa yiGoogle, sisebenza njengesitolo esisemthethweni sohlelo lokusebenza lwe-Android, sivumela abasebenzisi ukulanda izinhlelo zokusebenza ezenziwe ngekhithi yokuthuthukisa isoftware ye-Android SDK futhi ishicilelwe ngeGoogle. Isitolo sinikezela ngezinhlelo zokusebenza zamahhala nezikhokhelwayo. Izinhlelo zokusebenza ezixhaphaza amandla we-hardware wedivayisi zingabhekiswa kubasebenzisi bamadivayisi anezici ezithile zekhompiyutha, njengezinzwa ezinyakazayo zemidlalo encike kokuhamba noma ikhamera ebheke phambili ngokubiza ividiyo nge-inthanethi. Isitolo se-Google Play saba nezilandi ezingaphezulu kwezigidi ezingama-50 zokulanda ngo-2013 futhi sifinyelele kwizinhlelo zokusebenza ezingaphezu kwezigidi ezi-2.7 ezishicilelwe ngonyaka we-2017.
Yize ihlanganiswe namadivayisi amaningi we-Android, Isitolo se-Google Play sitholakala kuphela kumadivayisi aqinisekisiwe ngaphakathi kwe- "Android Ukuvumelana Uhlelo". Ngenxa yalokho, abakhiqizi bokubizwa nge- "ROMs yangokwezifiso", i.e. izinguqulo eziguquliwe ze-Android, azivunyelwe ukufaka inqwaba yezinhlelo zokusebenza ze-Google, kufaka phakathi i-Google Play Isitolo, ngesoftware yazo. Ukuvumelana kungabuyiselwa ngokufaka izinhlelo zokusebenza ze-Google kusuka komunye umthombo, njenge-OpenGApps, noma ngokusebenzisa ezinye izitolo zohlelo lokusebenza.
Izitolo zokusebenza zoMkhiqizi
Ngokungeziwe kwabanye abakhiqizi abenzi izinhlobo ezihambisanayo eziqinisekisiwe ze-Android, abanye abakhiqizi banqume ukuhlanganisa izitolo zabo zohlelo lokusebenza, kungaba ngokungezelela ku-Google Play Isitolo noma esikhundleni sokunye. Izitolo ezinjalo zohlelo lokusebenza zifaka i-Samsung Galaxy Store, efakwe kumadivayisi eselula e-Samsung eceleni kwe-Play Store ne-Amazon Appstore, efakwe esikhundleni se-Play Store ku-Amazons Fire Ucingo ne-Kindle Fire. E-India, isitolo se-Samsung Galaxy sisebenza sinikwa amandla yi-Indus App Bazaar futhi sinikeza ulwazi lwasendaweni ngezilimi eziyi-12 zamaNdiya kubo bonke abasebenzisi bazo. I-Amazon Appstore ingafakwa nakwamanye amadivaysi e-Android ngokulanda kusuka kuwebhusayithi ye-Amazon. Izitolo zezinhlelo zokusebenza zangaphandle Izitolo zohlelo lokusebenza ezincike ekuthini zifakwe kuqala ngumkhiqizi zikhona. Izibonelo eziphawulekile zifaka i-Aptoide, F-Droid, GetJar, slide ME, iMakethe yaseMogengen, i-Itch.io, ne-Uptodown.
Izitolo ezinjalo zohlelo lokusebenza zivame ukusetshenziswa ngabathuthukisi ukusabalalisa izinhlelo zokusebenza ezingavunyelwe ku-Google Play Isitolo, ngokwesibonelo ngoba zivumela abasebenzisi ukuthi bafinyelele kakhulu kusistimu noma banikele ngezinhlelo zokusebenza zabasebenzisi be-niche, njenge-software yamahhala neyomthombo ovulekile kuphela F -Droid noma imidlalo ye-indie Itch.io. Futhi zingasebenza ukusabalalisa izinhlobo "ezifakwe kuma-computer" zezinhlelo zokusebenza ezikhokhelwe mahhala. Isizathu sokusebenzisa ezinye izitolo zohlelo lokusebenza ezingezinye Abanye abasebenzisi bakhetha ukusebenzisa ezinye izitolo zohlelo lokusebenza ukugwema ukusebenzisa izinsizakalo ze-Google njengengxenye yefilosofi yabo. Izitolo zohlelo lokusebenza ezihlukile zingase futhi kube lula ukuzulazula kubasebenzisi futhi zivumele ukuthola izinhlelo zokusebenza kalula ngenxa yama-algorithms ahlukile noma ukuboniswa kwezinhlelo zokusebenza kodwa abasebenzisi abasebenzisa izitolo zohlelo lokusebenza lomuntu wesithathu noma i-Google Play ngeke baqiniseke ukuthi izinhlelo zokusebenza abazifakayo. kuhlolwe amagciwane we-malware noma awekhompyutha.
Esinye isizathu kwezinye izitolo zohlelo lokusebenza ezingezinye ukuthi ukusebenza okugcwele kwe-Google Play akutholakali ndawo zonke. Isibonelo, abasebenzisi baseChinese abakwazi ukuthenga izinhlelo zokusebenza ku-Google Play Isitolo, beziphoqa ukuthi zisebenzise ezinye izitolo zohlelo lokusebenza ezinjenge-AppChina neWandoujia.
Wikipedia: Uhlu lwezitolo zohlelo lokusebenza lwe-Android